Miralem Pjanić oo rajo weyn galiyay kooxaha Real Madrid iyo Paris Saint-Germain, kaddib markii… – Gool FM
Miralem Pjanić oo rajo weyn galiyay kooxaha Real Madrid iyo Paris Saint-Germain, kaddib markii…
(Italy) 06 Maajo 2019. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Bosnia Miralem Pjanić ayaa albaabka u furay suurtagalnimada uu kaga dhaqaaqi karo kooxda Juventus.
Hadalkan kasoo yeeray Miralem Pjanić ayaa waxay farxad u tahay qaar ka mid ah kooxaha waaweyn ee Yurub, ay ugu horeyso kooxaha Real Madrid iyo Paris St Germain, maadaama ay si aad ah u xiiseenayaan saxiixa laacibkan.
Miralem Pjanić ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay waxaa wax looga weydiiyay wararka lala xiriirinayo inuu ka tagayo kooxda Juventus wuxuuna kaga jawaab celiyay:
“Wax walba waa macquul kubadda cagta, waxaan joogey Talyaani mudo dhan siddeed sanno, waxaana u ciyaaray koox weyn, laakiin hadii uu qof walba ku qanco fikrada uu ku baxayo, waxaa suuragal ah inaan ka wada hadalno arintaas, laakiin aniga kama fikirayo taas”.
“Waxaan doonayaa inaan dhameysto xilli ciyaareedka, islamarkaana aan galo fasax, waxaan dhihi karaa bar-tilmaameedka ugu horeeya ee mustaqbalkeyga waa inaan ku guuleysto tartanka Champions League”.
Intaas kaddib Miralem Pjanić ayaa wuxuu ka hadlay wararka xanta ah ee lala xiriirinayo kooxda reer France ee Paris St Germain wuxuuna yiri:
“PSG waxay ka mid tahay siddeeda kooxood ee ugu fiican Yurub, waxayna dooneysaa inay ku guuleysato tartanka Champions League, kooxdan waxay soo jiidataa ciyaaryahan kasta”.
“Waxay heystaan mashruuc iyo ciyaartoy waaweyn iyadoo ay rajadu tahay ku guuleysiga tartanka Champions League”.